Ukutya okufundwayo kunye nokwenza ukuba ingqondo yakho isebenze ngokupheleleyo | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba uyazi ukuba kukho ukutya ukuze ufunde ngcono? Xa kufuneka uguqe phambi kovavanyo okanye uviwo, ukutya kuhlala kuthatha isitulo esingasemva. Nangona kunjalo, ukutya ngokungafanelekanga okanye ukutya ngokuthe ngqo kwisisu esingenanto akusiyo ingcinga efanelekileyo. Ukukhetha ukutya okwenzayo ngelixa ufunda kunokunceda kakhulu ingqondo yakho ukuba ifumane lonke ulwazi olusuka ezincwadini.
Ukutya okuthile kunika amandla engqondweni, ukuyigcina iphaphile, ijolise kwaye ilungele ukusebenza ngokupheleleyo Ngexesha lokufunda ixesha elide.
1 Ukutya okusemgangathweni ukufundisisa
1.2 Itiye elihlaza
1.3 Isandwich yengqolowa iphela
1.5 Awugxili ngokwaneleyo?
2 Igama lokugqibela
Ukutya okusemgangathweni ukufundisisa
Eyona nto ibalulekileyo kukuqinisekisa idosi elungileyo yezakhamzimba kuzo zonke izidlo, kuba ukutya okungafunekiyo akuloncedo kuwo nawuphi na umsebenzi womzimba, kubandakanya nezo zidlalwa yingqondo. Kodwa phakathi kwazo zonke ezo zinto zokutya zisempilweni kwaye zinesondlo esele zisaziwa, sifumanisa ezinye zivelela izibonelelo zazo zobuchopho kunye nezifundo. Ngenxa yoko, ukuba kufuneka uguqe ngamadolo akho, kufuneka ube nokutya okulandelayo kufutshane:
Ikofu kukutya okudala okufundwayo kunye nokuvusa ingqondo ngokubanzi. Esi siselo sibashushu ngengqondo yakho kwaye sinokukunceda ufunde ngakumbi nangcono. Kwelinye icala, kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba iziphumo zayo zezokwexeshana kwaye ayicetyiswa ukuba ikhangele umkhondo emva komnye sihlandlo ngasinye ziqala ukunyamalala. Kucetyiswa ukuba ungagqithi kwiikomityi ezi-2-3 ngosuku (ukuxhatshazwa kunokuba yingozi, kukuthintele ekucingeni ngokucacileyo), ke thatha ukumodareyitha kwaye ukhethe amaxesha kakuhle.
Ukuba ujonga enye indlela yekofu yokufunda, cinga iti eluhlaza. Idume ngokuxinana okuphezulu kwee-antioxidants, iti eluhlaza iya kuba ngumlingani wemisebenzi yobuchopho. Iziphazamiso zingumqobo omkhulu kwiiseshoni zokufunda, kwaye uphando lubonisa esi siselo sisempilweni sinokukunceda ngoxinzelelo.
Isandwich yengqolowa iphela
Ingqondo ifuna amandla okufunda, kwaye ii-carbohydrate ezintsonkothileyo lukhetho olufanelekileyo lokubonelela ngala mandla. Ukuba indlala ikuhlasela, qwalasela isandwich yesonka sengqolowa esipheleleyo esihamba kunye nejusi entsha yeorenji ukugxila ngcono kwaye ube namandla engqondo ngakumbi kwiiseshoni zakho zokufunda. Ngokwenxalenye yayo, ipasta yengqolowa iphela lukhetho olukhulu lokutya, kodwa gcina izahlulo ziphantsi kolawulo okanye uya kuziva unzima kakhulu kwaye ulahlekelwe sisantya sengqondo. Ngenxa yoko, njengekofu, ii-carbohydrate zinokuba ngamahlakani akho, kodwa kuphela kumlinganiso olungileyo.
Ukuba awuyazi into yokugcwalisa isandwich yakho, isalmon kufanelekile ukuba uyiqwalasele ngezizathu ezininzi. Ubutyebi bakho kwi I-Omega-3 fatty acids iluncedo kubungakanani bengqondo yakho, ukugxila kunye nokuqwalaselwa, izinto ezidlala indima ephambili ekufumaneni ulwazi oluvela ezincwadini. Ukongeza, ibonelela ngezinye izondlo ezifunwa yingqondo yakho, ezinjengeevithamini ze-B kunye ne-selenium. Ngamafutshane, okunye kokutya okugqibeleleyo ukufundisisa. Kwaye ukuba awuyondawo ye-salmon, ungakhathazeki, kuba kukho ezinye iintlanzi ezityebileyo kwi-omega 3. Ewe kunjalo, ngekhe zihambelane nesandwich zakho ... okanye ungaphelela ekuyileni into entsha nenencasa.
Jonga eli nqaku: Indlela yokuphucula uxinzelelo. Apho uyakufumana iingcebiso kunye namacebo amaninzi okwandisa amandla akho okugxila.
Amandla ayo aphezulu e-antioxidant iluncedo kwimemori kunye nokukwazi ukuqondaKe ukuba neeblueberries ezijikeleze xa ufunda ngumbono olungileyo, ngakumbi xa kuthelekiswa nokutya okulula okunezinto ezingenaxabiso.
Ukuba nengqondo yakho iphaphile kwaye ukulungele ukunkqonkqoza iitoni zolwazi kubaluleke kakhulu ukufumana okuninzi kuwo wonke umzuzu weseshoni yokufunda. Kwaye isipinatshi sinokukunceda wenze zombini enkosi ngenaliti yayo ye-folic acid, iqabane elinomdla kwinkqubo yovalo. I-Brokholi yenye yemifuno enkulu yokufunda kunye nokuhlala usempilweni. Ngokubanzi, zonke iziqhamo kunye nemifuno emnyama ngombala zilungile ukuba zifundwe..
I-Oatmeal lukhetho olukhulu kwisidlo sakusasa, ngakumbi ngamaxesha obango lwengqondo oluphezulunjengoko ingumthombo wamandla wexesha elide.
Nangona oku kutya kungasentla kunokukunceda ngamaxesha okufunda kunye nakwimfuno ephezulu yobuchopho ngokubanzi, oko kukuthi ngamaxesha athile, eyona nto intle, ngokwendalo, kukugcina ukutya okwahlukeneyo kunye nokunempilo. Ukwengeza, kubalulekile ukuba ungatsiba nasiphi na isidlo (ngakumbi isidlo sakusasa) okanye ii-neurons zakho ziyakuqaphela.
Kwakhona Qiniseka ukuba unika ingqondo ithuba lokuphumla kunye nokuchacha ekusebenzeni ukuze ujongane nosuku olutsha lwezifundo kunye neziqinisekiso. Inye kuphela indlela yokwenza kulala phakathi kweeyure ezisi-7 nezisi-8 ngosuku.
Awudingi ukuba ukutyise konke oku kutya ngosuku loviwoEndaweni yoko, ukuba ubusondla ingqondo yakho kakuhle, ukutya okunempilo, okulula kwaye mhlawumbi ikomityi yekofu okanye iti yanele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya okufundwayo
Iziphumo zokutya okungalunganga